Real Madrid Oo Lacag U Qaybisay Ciyaartoygeeda
HomeWararka MaantaReal Madrid Oo Lacag U Qaybisay Ciyaartoygeeda
Kaddib markii ay Real Madrid soo afjartay guulo xidhiidh ah oo ay sannadka 2016 kor ugu qaadday saddex koob oo kala ahaa Champions League, UEFA Super cup iyo FIFA Club world cup, dhamaan ciyaartoyga kooxda ayaa helay lacag dhiirrigelin ah oo ay kooxdu u qabisay.
Ciyaartoy kasta oo ka tirsan kooxda ayaa gacanta laga saaray lacag dhan 1,110,000€ (Hal milyan, boqol iyo toban kun oo Euro). 700,000€ oo ka mid ah lacagta waxa lagu siiyey ciyaaryahannada labada koob ee Club World cup iyo UEFA Super Cup oo ay kooxda dib ugu soo celiyeen kaddib muddo aanay hananin iyo sidoo kale Champions League oo ay ku heleen 260.000€.
Qaybta kale ee lacagta waxa ciyaaryahannada lagu siiyey tartanka Copa del Rey ee ganaaxa lagaga reebay Real Madrid kaddib markii ay ciyaarsiiyeen Chershev oo sharcigu dhigayey inaan la ciyaarsiin karin. Waxa kale oo u raacday lacago dhiirigelin ah oo dhan 150.000€ iyo gawaadhi qaali ah oo lagu siiyey guushii ay ka gaadheen ciyaartii Clasico ee Barcelona.
Dakhliga Real Madrid oo kor u kacay xili ciyaareedkan awgii, waxay maamulka kooxdu go’aansadeen inay wax ka siiyaan xiddigahooda lacagta badan ee soo xerootay.
Atletico Madrid vs Sevilla 2-0 – All Goals & Extended Highlights – La Liga
10/04/2017 Abdiwahab Ahmed